Ogaden News Agency (ONA) – Xisbiga Samayawi Part oo Kubaaqay Kacdoon Cusub.
Xisbiga Samayawi Part oo Kubaaqay Kacdoon Cusub.
Posted by Dulmane	/ July 31, 2017
Xisbiga siyaasiga ah ee Samayawi Part oo fadhigiisu yahay magaalada Addis Ababa ayaa bayaan uu soo saaray shacabka lagumaysto ee Itoobiya kudhaqan ugu baaqay in ay isugu soobaxaan banaanbax aad uwayn oo lagaga soo horjeedo kooxda TPLF.
Bayaankan kasoo baxay xisbiga Samayawi ayaa shacabka kudhaqan wadanka Itoobiya kacodsaday in ay udiyaar garoobaan mudaharaad aan wali noociisa la arag oo ah kii xukunka lagaga tuuri lahaa kooxda TPLF ee mudada dheer talada wadanka haysatay.
Xisbi siyaasadeedka Samayawi Part ayaa bayaankiisa kusoo beegay dhamaadka xukunkii dag daga ahaa ee taliska wayaanuhu uu soorogay 10 bilood kahor, wuxuuna xukunkii wayaanuhu soorogay ku egyahay todobaadkan fooda inagu soohaya.
Xisbiga Samayawi ayaa bayaankiisa shacabka kaga dalbaday in aan lookala hadhin dadaalka loogu jiro xoriyada iyo cadaalada ay shacabku raadinayaan, wuxuuna xisbigu codsaday in ay shacabku isugu yimaadaan xaafada Mika’il iyadoo banaan baxa lagu fidin doono xaafadaha magaalada Addis Ababa.
Kooxda TPLF oo banaan baxyada sharci daro utaqaana ayaa lafilayaa in ay isku dayi doono in ay xakameeyaan banaanbaxa, hase yeeshee xisbi siyaasadeedka Blug ama Samayawi Part ayaa dhankiisa aaminsan in aan la hor istaagi karin malaayiinta shacabka ah ee isusoo bixi doona.
Sikastaba ha ahaatee todobaadka soosocda ayaa lafilayaa kacdoono aad uwaawayn oo gilgili doona dhamaan daafaha wadanka, waxaana laqiyaasayaa in uu banaanbuxu noqon doono kii karkaarka lagu waydaarin lahaa kooxda TPLF.